७ वर्षकी बालिकाको शक्ति देखेर दुनिया भए चकित ! – KhabarTime
७ वर्षकी बालिकाको शक्ति देखेर दुनिया भए चकित !
एजेन्सी। क्यानाडामा बस्ने रोरी भ्यान केवल ७ बर्षकी भइन् । सामान्य बालिकाजस्तो देखिएकी छिन् । खानपान पनि सामान्य रहेको छ । तर कडा परिश्रम र प्रशिक्षणको माध्यमबाट, उनले आफूलाई विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली बालिकाको रुपमा रूपान्तरण गरेकी छिन् । हालसालै उनी संयुक्त राज्य अमेरिकामा अण्डर ११ र अण्डर १३ युवा राष्ट्रिय च्याम्पियन वेटलिफ्टिङ्ग (Champion weightlifting) बनिन् । उनी अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा कान्छी राष्ट्रिय च्याम्पियन भएकी छिन् । कसरी रोरी यती कलिलो उमेरमा यी सबै गरिरहेकी छिन् ? उनको उत्तर यस्तो पाउछौं ।
र्मैले पाँच वर्षदेखि वेटलिफ्टिङ्ग (weightlifting) गर्न थालेको हो । मैले बुबासँग सम्झौता गरेको छु कि जब जब म उपलब्ध तौल उठाउन शुरू गर्दछु, उहाँले मलाई नयाँ डम्बल (Dumble) र बार घण्टी दिनुहुनेछ । प्रत्येक दिन म मेरो क्षमता वृद्धि गर्न कोशिस गर्दछु । २०–२० ग्राम तौल एक ठूलो उपलब्धि हुने थियो । म ६ वर्षको हुँदासम्म मैले मेरो शरीरको तौललाई तीन गुणा बढी उठाउन थालें ।’
खानामा मलाई ‘पिज्जा’ (Pizza) मन पर्ने बताएकी छिन् । साथै उनी चकलेट पनि धेरै मात्रामा खाने गर्छिन् । उनले आवश्यक प्रोटीन भने प्राप्त गर्ने गरेकी छिन् । किनकि म छिटो बढ्दैछु । मलाई डाइटमा कुनै नियन्त्रणको आवश्यक्ता पर्दैन । म हप्ताको ४ घण्टा भारोत्तोलन गर्ने अभ्यास गर्दछु, ९ घण्टा व्यायामशाला (Gym) जान्छु ।’
उनले आफु कोबाट प्रभावित भएको भन्ने विषयमा कुरा गर्दै भनिन्, ‘मैले युट्यब (Youtube) मा टीम अमेरिकाको वेटलिफ्टर क्रिस्टिना पोप (weight lifter Crystina Pop) लाई देखेकी थिँए । त्यसपछि मलाई भारोत्तोलनको शौक भयो । तिनीहरू मेरो प्रेरणा हुन् । म मेरो परिवारमा एक मात्र खेलाडी हुँ । मेरा आमा बुबा पनि कुनै खेल खेल्नुहुन्न, भाइको संगीतमा रुचि छ । स्ट्रेंथ स्पोर्ट्समा (sports) म भारतको वेटलिफ्टर मीना कुमारीबाट धेरै प्रभावित छु ।’
‘म हाल २०२१ युएसए वेट लिफ्टिङ्ग युथ नेश्नल (USA Weight Lifting Youth National) को लागि तयारी गर्दैछु । म पावरलिफ्टिङ्ग (powerlifting) शुरू गर्दछु जब म सात वर्षको भएँ । यदि स्कूलहरू अब बन्द भएमा, म खेलकुदमा बढी समय दिन सक्छु । खैर, स्कूल सुरु हुँदा पनि, म अभ्यास गर्न मेरो यात्रामा होमवर्क (homework) गर्थें ।’
कुनबार जन्मेका व्यक्तिले अधिक धन लाभ गर्ने अवसर पाउने छन्, यस्तो छ रोचक तथ्य
सुस्मिताकाण्डः घरको ताला फोरियो, छिमेकी आमाले रुँदै सरापिन्, हत्यारा कहिल्यै ननिस्कियून है बाबु! (भिडियो हर्नुस्)